पूर्वाधार तथा आर्थिक स्तरोन्नतिमा लागिपरेका छौं
मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो केराबारी । गाउँपालिकाको केन्द्र साविक केराबारी गाविस वडा नं १ पर्छ । १० ओटा वडामा विभाजित यो गाउँपालिकाको पूर्वमा लेटाङ नपा, पश्चिममा सुनसरीको धरान उमनपा, उत्तरमा धनकुटाको चौबिसे तथा साँगुरीगढी गाउँपालिका र दक्षिणमा सुन्दरहरैंचा तथा बेलबारी नगरपालिका पर्छन् । प्रदेश १ कै पर्यटकीय क्षेत्र जेफाले भ्यू टावर, सिंहदेवी, महादेव–पार्वती गुफा, पाटी, सप्तकन्या गुफा, याङशिला तथा ओख्रे भ्यू टावर रहेको यो गाउँपालिकाका धेरै भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्दछन्, जहाँ भर्खरै मात्रै सडक, पानी बिजुली लगायत पूर्वाधारको पहुँच पुग्दै छ । प्रस्तुत छ, गाउँपालिकाको विकास निर्माण गतिविधि, योजना, समस्या, चुनौती लगायत विषयमा अध्यक्ष रोहित कार्कीसँग आर्थिक अभियानकी मोरङ संवाददाता रोशनी भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंले गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको २ वर्ष बित्यो । अहिलेसम्मको काम कारबाही कस्तो रह्यो ?
कार्यकालको तेस्रो वर्ष लाग्यो । यो बीचमा भर्खरै हामीले बजेट ल्याएका छौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका समय र त्यसपछि जनतामाझ गरिएका वाचा र त्यसयता आर्थिक समृद्धिका लागि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिपरेका छौं । विकास निर्माणका काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं । स्थानीय तहमा देखिएका केही समस्या र कठिनाइ कानून निर्माणसँगै समाधान भएका छन् । यो अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् ।
जनताले महसूस गर्नेगरी के के काम भएका छन् ?
हामीले जारी गरेको घोषणापत्र अनुसार नै काम अघि बढेका छन् । खानेपानी, सडक, पुल निर्माण भइरहेका छन् । जनताको आवश्यकता खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य, सडक जस्ता पूर्वाधार हुन् । तिनलाई आवश्यकताका आधारमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै लगेका छौं । खानेपानी नभएका स्थानमा शुद्ध खानेपानी पु¥याएका छौं । यो अवधिमा साढे ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेका छौं भने २ सय किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिसकेका छौं । हरेक वडामा स्वास्थ्य एकाइ राखेर कर्मचारीको आफैले व्यवस्था गरेका छौं । वडा नं ९ यो पालिकासँग टाढा र बेलबारीसँग नजिक थियो । त्यहाँ प्रदेश सरकारको सहयोगमा मोटरेबल पुल निर्माण अघि बढाएका छौं । हिजोको दिनमा प्रसूतिका लागि समेत अस्पताल जान नसक्नेहरू अब पुल बनेपछि लाभान्वित हुनेछन् । केराबारी गाउँपालिकाको समस्या खदमखोलाको कटान र आवतजावतका लागि पुल नहुनु हो । यी समस्याको समाधान पालिकास्तरको बजेटबाट हुन नसक्ने स्थिति छ । यद्यपि पालिकाबाट सरकारले मदन भण्डारी राजमार्ग बनाइरहेकाले यही आयोजनाबाट सम्बोधन हुने आशामा छौं । उक्त योजनाबाट सम्भवन नभए प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर डीपीआरका लागि बजेट राखेका छौं ।
जनताका धेरै ठूला आकांक्षाबीच पालिकाको नेतृत्व गर्न कत्तिको कठिनाइ छ ?
चुनौती र कठिनाइबीच नै सुधार गर्छु, विकास गर्छु भनेर जनप्रतिनिधिका रूपमा नेतृत्वमा आएको हुँ । केराबारी साविक पाँच गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिका हो । विकासका लागि केही विकट छ । पालिकाको केन्द्रसम्म आउने बाटाहरू सहज छैनन् । तर हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने काममा लागिपरेका छौं । उदाहरणका लागि, वडा नं ४ साविकको याङ्शिलाका माथिल्लो क्षेत्रमा विद्युत् पोलको व्यवस्था गरेर विद्युत् पु¥याएका छौं । यस्तै पाटी गाउँका केही स्थानमा मात्र विद्युत् पुगेको थियो । अब यस वर्षभित्र सबै स्थानमा विद्युत् पुग्नेछ । मोरङको कर्णाली भनेर चिनिने यस क्षेत्रलाई झिलिमिली बनाउने योजना छ ।
सडक निर्माणलाई विकासको मुख्य पाटोका रूपमा हेरिन्छ । तर जथाभावी सडक निर्माणले विनाश निम्त्याइएको छ । यस्तोमा गाउ“पालिकाले विकासका काम कसरी अघि बढाइरहेको छ ?
यो समस्या हाम्रो पालिकामा पनि छ । तर पहाडी क्षेत्रमा एकपटक मेशिन लगाउँदा पहिरोको स्थिति देखियो भने अर्काे वर्षदेखि मेशिनको प्रयोग नगर्ने नीति लिएका छौं । हामीसँग प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ । दुईओटा वडा हेर्नैगरी एउटा सब–इन्जिनीयर र पाँचओटा वडा हेर्नेगरी एक इन्जिनीयर राखेका छौं । अब यहाँका योजना बनाउँदा उहाँहरूले डिजाइन गर्नुहुन्छ । उहाँहरूबाट नभएकोमा हामी थप अनुभवी र मन्त्रालयगत इन्जिनीयरसँग परामर्श लिएर विकास निर्माणका योजना बनाइरहेका छौं । वर्षाको पानीले बगाउने सम्भावना भएका तथा पहिरोको जोखिममा रहेका सडकमा सुरक्षा पर्खाल तथा जाली हालेर व्यवस्थित पार्ने गरेका छौं ।
जनप्रतिनिधिबाट प्रतिबद्धता अनुसार काम भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
२० वर्षपछि निर्वाचन भयो । त्यसको २ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका छौं । यो अवधिमा जन अपेक्षा अनुसारका सबै काम एकैपटक गर्न नसक्नु स्वाभाविक नै हो । यसका लागि समय लाग्छ । कानून कार्यान्वयन, अधिकार जनतासम्म पुर्‍याउने काम क्रमिक रूपमा हुँदै गएका छन् । धूले बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था फेरिएको छ । कतिपय सडक कालोपत्र भइसके । खानेपानी सुविधा पुर्‍याइएको छ । धेरै योजना सञ्चालन हुँदै छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ । विद्यालयको अनुगमन भएको छ । कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम हुँदै राजधानीसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता छैन ।
चालू आवको बजेट कस्तो ल्याउनुभयो ? केमा बढी प्राथमिकता दिनुभयो ?
खासगरी गाउँपालिकाले लिएको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिमा आधारित भएर बजेट ल्याएका छौं । बस्ती स्तरबाट प्राथमिकतामा परेका योजना तथा कार्यक्रमलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं । बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई सँगै बढाउनुपर्छ । यही मान्यताका साथ पूर्वाधार विकासतर्फ सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नति, खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, विद्यालय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । साथै महिला सशक्तीकरण एवं बालमैत्री कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएका छौं । हाम्रो लक्ष्य गाउँपालिकाको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरोन्नति गर्दै नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गराउनु हो । पालिकाले चालू आवका लागि रू. ५२ करोड १३ लाख १६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाले ‘पूर्वाधारमैत्री लगानी : स्वरोजगार उन्मुख बिहानी’ नारा तय गरेको छ ।